China automatical cheni system inoshanduka angle girazi ichichekedzanisa metering muchina fekitori uye vagadziri | Zhengxing Mechan
Variable angled kutenderera system
Muchina uyu kuita zvakajairika kumucheto makorari uye ngowani kumucheto makorari
a) Kudzora system:
Muchina uyu unoshandisa PLC kudzora uye inobata pani inoshanda sisitimu. Mushini unogona kumhanya otomatiki modhi uye manyore mode.
b) Variable angle change renji
Mavhiri mashanu ezasi anokwanisa kugadzirisa kona kubva pa0 degree kusvika pa45 degree. Iyo yekutenderera sisitimu inoshandisa mapatya miseve inotsigira chimiro, mota danda inotsigirwa kubva kumicheto miviri iyo inopa yakanaka kwazvo chiyero uye inochengeta zvakafanana kuenderana panguva yekutenderera.
c) Mvura inotonhora.
Iyo vhiri tangi yekumberi 5 mavhiri anotora kutenderera system, iyo inogona kuenderana nevhiri zvinoenderana nekona.
d) Pasi uye furemu:
Yakagadzirwa nesimbi yekugadzira mushure mekurapa kwekupisa kuti ive nechokwadi chekugadzikana uye kusimba.
cheni inotakurisa system, mapedhi anofamba achitevedza danda, rabha yakatarwa pane nylon mapedhi.
Iyo muchina ine yakasimbiswa yepakati rutsigiro. Iri rine basa rakakosha kugadzirisa iyo yakatwasuka yakatwasuka kana ikawana kumwe kusanduka mukufamba kwenguva.
f) Pasi, kutsigira, kutakura
Yakagadzirwa nesimbi yakakandwa kuti ive nechokwadi chekugadzikana uye kusimba
g) Muchina uyu unoshandisa mhando yepamusoro CDQC mota
h) Mberi njanji kufamba:
Injini, inogona kufamba yakafanana kuti ienderane neakasiyana girazi ukobvu.
i) Kuisa / kudzima kurodha conveyor
Mabhandi enguva, mabhandi ekurodha anogona kugadzirisa kukwirira kuti abvise girazi rakasiyana.
j) Girazi rekutsigira furemu shandisa Aluminium extrusion bar, ine mapurasitiki.
k) Kushanda nekumhanyisa kugadzirisa:
kuburikidza nekumhanyisa regulator, nemaoko.
l) Amperometer mita:
tarisa vhiri kumanikidza.
m) Spindles ye arris inotora dhonza mahwendefa dhizaini, iyo isiri vibration mukushanda.
n) Sisitimu yemvura
Mvura inoparadzirwa mumushini uye tangi yemvura isina tsvina. Wheel tank zvitoro zvinobatana neimwe isina tsvina yekudonha pombi iyo iri nyore kwazvo kuisirwa. (pic IV). Iyo yakakomberedza mvura chubhu yemvura inopinda yakabatana neese vhiri kamwene.
Mberi mitira kubviswa:
Min. girazi saizi:
Kwose kuyera (LWH):
Pashure: 15 motors otomatiki bhora rinotakura akasiyana angle girazi rinotenderera muchina unodzora
45 Degree Girazi Edge Machine
Girazi Edging Mitering Machine
Girazi Mitering Machine
Girazi Multi Rinoshanda Kutenderera Uye Mitering Machine
11 Motors otomatiki bhora akatakura shanduka ang ...
10 Motors otomatiki bhora rinotakura rinorema basa g ...
15 Injini otomatiki bhora akatakura shanduka Ang ...